Samy miaka-daza… : sambany hiray sehatra i Elidiot sy i Mario | NewsMada
Samy miaka-daza… : sambany hiray sehatra i Elidiot sy i Mario
« Magnagnioh » andaniny, « Folaka lakile » ankilany. Hira samy nampiaka-daza vetivety an’i Elidiot sy i Mario ireo. Hiray sehatra eny Mahitsy izy mirahalahy ireto.
Nitarafana ireo mpanakanto miaka-daza sy ankafizin’ny maro amin’izao fotoana izao, ny fetin’ny Paka lasa teo. Anisan’ny nisongadina tamin’izany i Elidiot, izay nampitorajofo tetsy amin’ny Kianja annexe Mahamasina sy tamin’ireo toeran-kafa. Nialoha izany, mbola nampifaly tany Antsirabe izy, ary tsy nisy nodiavina ny kianja.
Etsy Andaniny, angamba raha misy ny hira tsy afaka ambavan’ny maro tato anatin’ny herinandro vitsivitsy dia ny « Folaka lakile ». Hiran’i Mario, mpanakanto tanora, anisan’ny misongadina sy miaka-daza amin’izao fotoana izao ihany koa. Ifarombahana ny maka azy mirahalahy ireto amina fampisehoana, noho izay lazany izay.
Hanam-bintana manokana ny eny Mahitsy, satria hiray sehatra eny i Elidiot sy i Mario ny alahady 22 avrily izao, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ao amin’ny Kianja Be. Sambany vao hiray sehatra izy ireo, raha ny nambaran’ny mpikarakara.
“Face à face samy ngeza” ny lohatenin’ny fampisehoana, satria na samy vao haingana aza no niditra ny sehatra, efa milahatra amin’ireo mpanakanto lazaina fa goavana izy ireo, raha ny isan’ny mpankafy no itarafarana izany. “Hataon’izy ireo avokoa ireo hirany malaza. Misy koa ireo vaovao, izay inoana fa ho tian’ny mpijery, satria hahazo tombony ireo any Mahitsy”, hoy hatrany ny fanazavan’ny mpikarakara.
Musique du Sud : Tiharea retrouve la scène tananarivienne 02/03/2021
Mada film Lab : l’IFM lance un appel à projets 02/03/2021